Esinye sezidingo ezisemqoka kwanoma yimuphi ifenisha eklanyelwe ukwakha ikhaya elithobileyo ukusebenza nokududuza. Ngeshwa, kuvame ukuthi kwenzeka ukuthi lesi simo asihlangabezane. Sasihlala kangaki ukuhlala esihlalweni, izingalo zazo ziphakeme futhi zingakhululekile, kodwa ngenxa yokuvinjelwa okungekho emhlane, umgogodla ubuhlungu? Okungafani nalesi simiso yizihlalo zesikhwama sokuqeda kabusha ezibhalwe kabusha.
Ifenisha yalolu hlobo luvele emakethe yaseRussia maduzane, kodwa kakade yakwazi ukuthola udumo njengenye yezinto ezingaphakathi ezikhululekile kakhulu. Inzuzo engafanelekile yezihlalo ezinjalo ukuthi zilingisa ngokoqobo zonke izingcingo zomzimba wenkosi yazo, zimnikeza induduzo eyinhle nomqondo wokuphumula.
Igama elithi "recliner" lisuselwa egameni lesiNgisi elisho "ukubuyela emuva." Noma kunjalo, kuyoba iphutha elikhulu ukucabangela ukuthi lifanele noma iyiphi ifenisha yokubopha. Konke ngokuklama okukhethekile kwamadivayisi afanayo. Izingxenye zabo eziyinhloko yi-backrest mobile, enezinhlobo eziningana zokugxilonga, kanye ne-footrest elula, isikhundla, ngokwemvelo, esingashintshwa nomnikazi. Ngaphezu kwalokho, izingxenye ze-pillow izingxenye zesihlalo zenziwa ngendlela ecacile yokuphinda ngokuphindaphindiwe ukuma komgogodla womuntu. Lokhu kusho ukuthi, lapho uhlala esihlalweni sobuhle, umhlane wakho awugcizelelwanga, umshini ugcina umzimba wakho endaweni ekhululekile, okuvumela ukuba uphumule ngemva kosuku olunzima. Eqinisweni, ngenxa yalesi sizathu, ifenisha enjalo enkulumweni yansuku zonke ivame ukubizwa ngokuthi "i-relax-chair".
Izindlalelo zokuhlalisa izikhali zinezimo ezintathu eziyinhloko, ezenzelwe izimo ezahlukene.
Esikhundleni sokuqala, lolu hlobo lwefenisha alufani kakhulu nokujwayelekile. I-backrest angle ingaba ngu-100 °, okuyinto engcono kakhulu yokuhlala. I-footrest kule mode isusiwe.
Esikhathini sesibili, i-backrest, ehlezi ngo-110 °, ihlangene kahle ne-footrest ephakanyisiwe futhi ephakanyisiwe kancane. Lokhu kuvumela hhayi kuphela ukuphumula emuva nangentamo yakho, kodwa futhi ukuphumula izinyawo zakho, okubaluleke kakhulu kubantu abanomsebenzi "wokuma". Lemodi ilula kakhulu ukubukela i-TV, ngoba ngokuvamile ibizwa ngokuthi "i-TV".
Esikhundleni sesithathu - imodi "yokuqamba amanga" - ngemuva kwesihlalo kuhlanganiswa cishe kufana phansi, futhi ukunyathela izinyawo kuphakanyiswa phezulu.
Uhlobo lwesihlalo "u-recliner", kuye ngokuthi imodeli ingaba nenani elikhulu lemisebenzi eyengeziwe. Ukushintshaniswa, ukubhunga, i-aromatherapy, ukushisa okuhlala phansi, isidlali se-mp3 ngisho nomsakazo. Ngokwemvelo, intengo yefenisha incike kulokhu. Ngaphezu kwalokho, ungakhohlwa ukuthi izihlalo ezibuyiselwayo zinezinhlobonhlobo zezinhlobo futhi ziyahluka ngobukhulu nendlela yokuguqulwa, nokuklama. "I-Marseille", "iMadrid", "iDresden", "Capri" - lokho nje uhlu oluthile lwamamodeli walolu hlobo. Enye yezinto ezilula kunazo zonke isihlalo esibuyiselwayo saseManchester, esinomsebenzi omuhle wemisebenzi kanye nomklami wezinhlobonhlobo zakudala. Ngenxa yezinhlobo zayo ezinhle futhi ubukhulu obulinganiselwe,, ngokungafani nezinye izinketho, kalula kufinyelele ngisho nasendlini eseduze kakhulu.
Izinduna zokuhlalisa izikhali zinezinhlobo eziningana. Ngaphambi kokuthenga ifenisha enjalo, ungakhohlwa ukunquma ukuthi yiziphi izinhlobo ezifanele kakhulu kuwe. Ibhodi lokuhamba? Umbhede ophungayo? I-massager? Futhi mhlawumbe, kufanele uthenge ngokushesha umqamuli we-sofa?
Ukuze isihlalo sakho sivumelane kahle ngaphakathi, sibheke ngokukhethekile umklamo wayo nesitayela sokwenziwa. Umbala, uhlobo lwe-upholstery, umumo - yilokho okufanele ukucabange, ukukhetha ifenisha ekamelweni lakho.
Isihlalo sobuhlalo esine "recliner" esakhiwe ngesikhathi esisodwa sezinhlobo zefenisha ekhaya. Yenziwe ngokucabangela izici zesimiso somzimba womuntu, inikeza induduzo enkulu kunesihlalo sobukhosi noma insipho evamile. Izindlela zayo ezihlukahlukene zikuvumela ukuba ufunde, ubukele i-TV, uphumule ngemva komsebenzi wosuku, uxoxe nabangani abanokukhululeka okulula. Noma nje udoti. Futhi, okubaluleke kakhulu, ukuklama kwayo okukhethekile kuvimbela noma yikuphi ukucindezeleka emgodini, ngaleyo ndlela kulondoloze impilo yakho kanye nemizwa emihle.
Ikona yekhishi ngezandla zabo - yenza kube lula kunalokho kubonakala!
Abantu edume kunazo Kazakhstan
Inthanethi akusebenzi? Ungagijimeli ukwethuka!